Air Saver Unit PARKER HANNIFIN (THAILAND) CO., LTD.
လေအလွန်အကျွံ သုံးစွဲခြင်းကို လျော့ရန်အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လျော်ညီဆုံးသော နည်းလမ်းတခုဖြစ်ပါသည်။ Air saving unitသည် စွမ်းအားချွေတာခြင်းနှင့် CO2 လျော့ချခြင်းကို ထောက်ပံပေးသည်။ Air Saver Unit သည် လေအသုံးပြုချင်းကို 50% ထိ လျော့ချပေးကာ လေမှုတ်ထုတ်သည့်စနစ်ကိုလဲ ထောက်ပံပေးပါသည်။
An environmentally friendly solution to reducing air consumption. The air saving unit contributes to power savings and CO2 reduction. By using switching valve technology, the Air Saver Unit can reduce air consumption by up to 50% and improves blow efficiency in air blow applications.
Parker Hannifin ကုမ္မဏီ ဟာရွှေလျားသွားလာမှုဆိုင်ရာ နည်းပညာပိုင်းတွင် အောင်မြင်ကျော်ကြားနေသော ကမ္ဘာထိပ်တန်းဝင်ခေါင်းဆောင် ၂၅၀ က ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားသော ကုမ္မဏီ တခုဖြစ်ပါသည်။ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ တိုင် စက်ရုံသုံးပစ္စည်းမျိုးစုံ ထုတ်လုပ်သည့် ဈေးကွက်တွင် သုံးစွဲသူများ၏ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးရုံသာမက ယုံကြည်မှုကိုပါ အောင်မြင်စွာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သော ကုမ္မဏီတခုဖြစ်ပါသည်။
Parker မှ ထုတ်လုပ်တဲ့ စက်ရုံသုံးပစ္စည်းများကို နေရာတော်တော်များများတွင် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အရည်အသွေးမြင့် အင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းများနှင့်oil and gas, Constructing, life science, Power generation နှင့် Industrial Machinery များအတွက် အဆင့်မြင့် နည်းပညာ အသုံးပြု၍ ထုတ်လုပ်ထားသော ပစ္စည်းများကို ဈေးကွက်အလိုက် ဖြန့်ဖြူးလျက် ရှိပါသည်။
Parker Hannifin(Thailand) ကို ၁၉၉၇ တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံရှိ စက်ရုံခွဲများတွင်, Motion system(hydraulic, pneumatic, electromechanical, SSD Drive), Filtration, Fluid connectoမ, Instrumentation, Engineered materials ဟူ၍ အဖွဲ့(၅)ဖွဲ့ခွဲ ကာ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းသာမက ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း လုပ်ဆောင်နေပါသည်။
Parker Hannifin Co,Ld ၏ ထိုင်းနိုင်ငံဖြန့်ဖြူးရေးကွန်ယက် များသည် မြန်မာနိုင်ငံသိုရောက်ရှိနိုင်ပြီး အပိုပစ္စည်းမျိုးစုံသာမက ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများကိုပါ ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။
အချိန်နေရာမရွေး Parker Hannifin Co,Ldသည် သုံးစွဲသူအကျိုးကိုသာ ရှေးရှူကာ လိုအပ်သော ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုထောက်ပံပေးးလျက် ရှိပါသည်။
Parker Hannifin Co,Ld ၏ ထိုင်းနိုင်ငံဖြန့်ဖြူးရေးကွန်ယက် များသည် မြန်မာနိုင်ငံသိုရောက်ရှိနိုင်ပြီး
Valve , Filter, Air Filter, Oilo Filter, Pre Filter, Industrial Hydraulics, go here Filtration, Hydraulic Filter, Lab Gas Generator Nitrogen, Hygrogen Zero Air, Process Filter Housing, Compressed Air Dryer and Gas , Hydraulic Hose, Industrial Hose, Air Hose, CNG Hose, Fitting, Pneumatic, Gear Pump Hydraulic, Motor Hydraulic, Denision, Piston, Cylinder, Accumulator, Solenoid Valve, Hydraulic Pump, Hydraulic Valve, Seal, Regulator, Instrumentation Process Control, Electromechanica.
Phone : +662 186 7000
E-mail : phthailand@parker.com